ဖမ်းဆီးရမိလျှင် သူမအပေါ်မတော်မတရားပြုကျင့် မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် တုန်လှုပ်နေရတဲ့ မေပန်းချီ…. – Cele Oscar
ဖမ်းဆီးရမိလျှင် သူမအပေါ်မတော်မတရားပြုကျင့် မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် တုန်လှုပ်နေရတဲ့ မေပန်းချီ….
April 21, 2021 By L YC Celebrity
﻿﻿ပရိသတ်ကြီး ရေ သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီ ကတော့ နွေဦးတော် လှန်ရေးမှာ ဦးဆောင် ပါဝင်ခဲ့ သူပါနော်။ အခုလို ပါဝင်ခဲ့ တာကို လည်း နောင်တ ရ မ နေဘဲ ဆက်လက် တိုက်ပွဲ ဝင် နေသူ ပါနော်။ သူမ ကတော့ လက်တလော မှာ ခြိမ်း ခြောက်ခံ နေရ ပါတယ်နော်။ လှုပ်ရှား မှုမှာ ပါဝင် ခဲ့လို့ စစ်ကောင်စီ က ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်မခံ ရသေး ပေမယ့်လည်း ခြိမ်းခြောက် စာ တွေတော့ ပို့ခံ နေရပါ ပြီနော်။
စာထဲ မှာ ပါ တဲ့ အကြောင်းရာ ကတော့ သူမအား ဖမ်းမိပြီ ဆိုတာ နဲ့ ဖောင်းဒိုင်း မယ်လို့ ရေးသား ထားတာ ပါနော်။ မေပန်းချီ ကတော့ မိခင်ဖြစ်သူ ဆေးရုံ တက် နေရတာကြောင့် အတော်လေး ကို စိတ်သောက ရောက်နေ ရချိန်မှာ အခုလို ခြိမ်းခြောက်ခံ ရတာကြောင့် ပိုပြီးစိတ် ဖိစီး နေရတာ ပါနော်။
မေပန်းချီ ရဲ့ မိတ်ကပ် ဆရာမ ကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ” မေပန်းချီက ‌တော် တော်သည်းခံ တတ်တဲ့ မိန်းမ ပါ ဒါမယ့် သူ့ကို လုပ်လို့ရတယ်သူ့အ မေ သူ့မိဘထိရင်တော့ ဘယ်အရာမှ မရဘူး အဲ့ဒါသိထား သူများမိဘကို စိတ်ဒုက္ခပေးလို့ သူ့မိဘ ဆေးရုံတက်ရတာ (၁၁) ဝတ်ရမဲ့ သီလရှင်တောင် မဝတ်ဘဲ ပြန်ထွက်လာရတာ အယုတ်တမာမတွေ အသံဖိုင်က တင်ပေးမှာ မပူ နဲ့ အားမနာ တော့ဘူး ဘယ်သူ့ကိုမှသိထားဖို့ “လို့ ရေးသား ထားတာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ…..
ပရိသတျကွီး ရေ သရုပျဆောငျ မပေနျးခြီ ကတော့ နှဦေးတျော လှနျရေးမှာ ဦးဆောငျ ပါဝငျခဲ့ သူပါနျော။ အခုလို ပါဝငျခဲ့ တာကို လညျး နောငျတ ရ မ နဘေဲ ဆကျလကျ တိုကျပှဲ ဝငျ နသေူ ပါနျော။ သူမ ကတော့ လကျတလော မှာ ခွိမျး ခွောကျခံ နရေ ပါတယျနျော။ လှုပျရှား မှုမှာ ပါဝငျ ခဲ့လို့ စဈကောငျစီ က ဖမျးဝရမျး ထုတျမခံ ရသေး ပမေယျ့လညျး ခွိမျးခွောကျ စာ တှတေော့ ပို့ခံ နရေပါ ပွီနျော။
စာထဲ မှာ ပါ တဲ့ အကွောငျးရာ ကတော့ သူမအား ဖမျးမိပွီ ဆိုတာ နဲ့ ဖောငျးဒိုငျး မယျလို့ ရေးသား ထားတာ ပါနျော။ မပေနျးခြီ ကတော့ မိခငျဖွဈသူ ဆေးရုံ တကျ နရေတာကွောငျ့ အတျောလေး ကို စိတျသောက ရောကျနေ ရခြိနျမှာ အခုလို ခွိမျးခွောကျခံ ရတာကွောငျ့ ပိုပွီးစိတျ ဖိစီး နရေတာ ပါနျော။
မပေနျးခြီ ရဲ့ မိတျကပျ ဆရာမ ကတော့ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ” မပေနျးခြီက ‌တျော တျောသညျးခံ တတျတဲ့ မိနျးမ ပါ ဒါမယျ့ သူ့ကို လုပျလို့ရတယျသူ့အ မေ သူ့မိဘထိရငျတော့ ဘယျအရာမှ မရဘူး အဲ့ဒါသိထား သူမြားမိဘကို စိတျဒုက်ခပေးလို့ သူ့မိဘ ဆေးရုံတကျရတာ (၁၁) ဝတျရမဲ့ သီလရှငျတောငျ မဝတျဘဲ ပွနျထှကျလာရတာ အယုတျတမာမတှေ အသံဖိုငျက တငျပေးမှာ မပူ နဲ့ အားမနာ တော့ဘူး ဘယျသူ့ကိုမှသိထားဖို့ “လို့ ရေးသား ထားတာပါ ပရိသတျကွီးရေ…..
ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ အမှု့ကိုနှောင့်နှေးသွားအောင် သတင်းအမှားတွေလွှင့်ပြီးမနှောက်ယှက်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ သားဖြစ်သူ ကြည်သာဌေးလွင်